Mitsara yaEmilia Pardo Bazán | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Vanyori, Type, Literature, Novela
Mazuva mashoma apfuura chirangaridzo chekuzvarwa kwemumwe wevanyori vedu vakakosha chakapembererwa: Emilia Pardo Bazán. Akazvarwa mukati La Coruña, mugore 1851, yaive yemhuri ine mbiri. Aive mukadzi ane mukurumbira kwazvo wenguva yake. Akaita nzendo dzakawanda uye akasangana nevanyori vakadai saVictor Hugo kana Zola.
Akaparadzana nemurume wake ndokutanga a kudanana naBenito Pérez Galdós. Akatungamira chikamu chemabhuku cheAthenaeum uye muna 1916 akagadzwa kuva purofesa paYunivhesiti yeMadrid. Akafira muna 1921, zvakare kuMadrid.
Yakanga iri yeChokwadi
Kukura kwe Chokwadi Kwaive kukunda kweruzivo, mhando yakaita kuti zvikwanise kuratidza chokwadi nenzira yakatendeka. Vanyori vanonyanya kumiririra enguva ino vaive vaGaldós, Juan Valera, Leopoldo Nhamo "Clarín" naEmilia Pardo Bazán. Iyo yekupedzisira yaive yakanangana ne Naturalism, yakatorwa kweRealism yakaonekwa muSpain kuma 1880 nekuburitswa kwa "Vakabviswa nhaka" de Galdos.
Emilia Pardo Bazán ndiye aive mukuru mudziviriri muSpain weiyo Naturalism. Panyaya yemunyori uyu, kufamba uku kwakaumbwa muchiKaturike. Nekudaro, chimiro chaZola chechimiro chinongoonekwa uye chiri pasi pekugona kwevanhu kumukunda kuburikidza nerutendo, izvo zvinomukwidziridza pamusoro pezvimwe zvisikwa. Pakati pezvinyorwa zvake zvinomira kupfuura zvese "The pazos de Ulloa" (1886) uye "Amai hunhu" (1887), ese ari maviri akagadzirwa munzvimbo dzekumaruwa dzeGalicia dzinoita nyika dzakavharwa dzinotongwa nezvido.
Uye ikozvino, isu tichaenda kupemberera kuzvarwa kwemunyori uyu akatisiira mitsara yakanaka kwazvo yenhoroondo. Mamwe acho ndeaya anotevera:
"Ndine chakakosha pakati pedzose pfungwa dzekuti novel harichisiri basa revaraidzo chete, nzira yekunyengedza zvinofadza maawa mashoma, anosvika kumagariro, kwepfungwa, kudzidza kwenhoroondo, asi pakupedzisira kudzidza."
«Nhamo yemurume wemazuva ano ndeyekuzvida uye nekunzwisisa; ane udyire zvakakwana kuti ape zvido zvake, anzwisise kutambura sezvaakaona mhirizhonga yavakakonzeresa padambudziko remumwe munhu. Nekuti yaive yemukati uye yakanyatsovanzwa, kurwira kwaFelipe kwaisamboita zvechisimba, kana kusagadzikana kwake. Kutaura chokwadi, iyo yakasarudzika mamiriro haigone kunzi kurwa: kune kurwa pachako, apo kuda kuchachinja pakati pemhinduro mbiri ».
“Hatisarudzi manzwiro edu, vanouya kwatiri, vanokura sehuswa husina munhu unosima uye hunofashamira pasi. Uye manzwiro dzimwe nguva anozvibata muhuhwana husina kukosha, muchokwadi, achiratidza chokwadi chezvepfungwa, sezvo zvimwe zviratidzo zvinyoro zvichishora hosha dzinouraya ».
«Mufundisi anogona kuita zvese zvakaipa zviri munyika. Dai taive nerombo rakanaka kusatadza, tanga zvakanaka; isu takange taponeswa panguva chaiyo yekugadzwa, iyo yanga isiri iyo yekutengesa isina kusimba. Muchokwadi, kumisikidzwa kunoisa mitoro yakamanikana patiri kupfuura kune vamwe maKristu, uye zvakapetwa kaviri kuti mumwe wedu ave akanaka. Uye kuve zvakadaro munzira iyo nzira yekukwana yatinofanira kupinda kana tichizvimisikidza isu sevapristi zvaizoda, zvakafanira, kunze kwekuyedza kwedu, kuti nyasha dzaMwari dzitibatsire. Iko hakuna.
"Udzvanyiriri hwakafanana nenjere uye hautombova opera."
"Zuva" mamwe madzishe "akaudza Amparo kuti aive akanaka, musikana aidzungaira aiziva bonde rake: kusvika panguva iyoyo anga ari mukomana mune masiketi. Uye hapana chero munhu akamutora neimwe nzira: kana mumwe munhu ane hutsinye mumugwagwa akamuyeuchidza kuti aive chikamu chehafu yakanakisa yerudzi rwevanhu, akazviita hafu nematama ake, uye akaramba nezvibhakera, kana zvisiri nekurova nekurumwa, rumbidzo yemutorwa. Zvese zvinhu zvisina kubvisa hope kana appetite.
"Hazvina musoro kuti vanhu vaise tariro yavo yekuregererwa uye rombo rakanaka pamafomu ehurumende avasingazive."
"Dzidzo yevakadzi haigone kunzi dzidzo yakadaro, asi kurovedzwa, sezvo kuteerera, kupusa uye kuzviisa pakupedzisira zvinokurudzirwa."
"Dzidzo yepanyama inoita kuti vakadzi vawedzere muhukuru uye simba uye vanowedzera ropa ravo."
"Nemuromo tinowanzofa sehove yakapusa, uye hausi kufa kwemurume akangwara, asi wemhuka inotonhora, isina kujeka, mbishi."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mashoko akakurumbira aEmilia Pardo Bazán